विशेष Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com विशेष Archives - खबर प्रवाह
मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्र गफाडी खोज्नुपर्‍यो भने केपी ओली भेट्दा हुन्छ : नेता नेपाल
काठमाडौं। नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीले कहिल्यै संगठन नबनाएको बताए। शुक्रबार बबरमहलमा नेकपाको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीको प्रशिक्षणमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले नेकपा एमाले बनाएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘पूर्वएमालेका साथीहरु भुक्तभोगी छौं। केपी ओलीले कहिल्यै संगठन बनाउनुभएन। नेकपा एमाले उहाँले बनाएको होइन।’ नेता नेपालले ओलीका कारण देशकै शीर निहुरिएको भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन कलंकित […]
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बिघटनको सरकारी निर्णयसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिभाजित भएको छ। राजनीतिक रुपमा बिभाजित भएको नेकपा कानूनी रुपमा भने बिभाजित भइसकेको छैन। दलसम्बन्धी वैधानिकताका लागि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको र आयोगमा विवाद निरुपण विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले कानूनी रुपमा नेकपा अहिले पनि एउटै छ। नेकपा बिभाजन भएसँगै ओली–प्रचण्ड दुवैतिर समूह अदलीबदलीले […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको ‘बा’ प्रवृतिका पक्षपोषकहरुका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिले कोही र कहीँ बाँकी राख्दैन। ‘बा’ संस्कृतिका पक्षपोषकहरुका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा छ।’ नेकपाले नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग बिहीबार भएको अन्तर्क्रियामा नेपालले ओलीको ‘बा प्रवृत्ति’विरुद्ध आफूहरु संघर्ष […]
काठमाडौं। मोहन वैद्य ‘किरण’ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु सरकारको असफलता भएको बताएको छ। शनिबार सञ्‍चारकर्मीसँग भेटमा वैद्यले प्रधानमन्त्रीको दम्भका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुक थप संकटमा पुगेको र उपलव्धी नै गुम्‍ने खतरा सिर्जना भएको तर्क गरे। संविधान अनुसार सरकार बनाए पनि नेकपाले संविधानलाई नै प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। […]
बिराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लम्पसारवादी एवं कठपुतली भएको बताएका छन् । बिराटनगरमा शनिबार आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्दै शर्माले ओलीलाई विदेशीको इशारामा चलेको कठपुतली भएको आरोप लगाए । ‘उनी लम्पसारवादी, कठपुतली हुन् । यो देशमा कोही निरीह प्राणी छ भने ओली हुन्’ शर्माले […]
ओली श्री ३ बन्न खोजे, छिटै पत्तासाफ हुन्छन् : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री ३ महाराजधिराज जंगेको बाटोमा हिंडेको बताएका छन्। सोमबार जनसांस्कृतिक महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली सामन्ती शासकजस्तो श्री ३ महाराजधिराज जंगेको बाटोमा हिंडेको बताएका हुन्। प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको दिनबाट नै प्रधानमन्त्री ओली पराजित […]
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको बिहीबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । २५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् […]
ओलीको त्रास : संसद ब्यूँतिने भो, सरकार ढल्ने भो, सूर्य चिन्ह गुम्ने भयो
काठमाडौं। ५ भदौ २०७६ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्यो, जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वास्थ्योपचारका निम्ति सिंगापुर जाने तयारीमा थिए। उक्त बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ओलीलाई स्वास्थ्य लाभका निम्ति शुभकामना दिए। तर, नेपालको त्यो शुभकामना ओलीले स्वीकार गरेनन्। सिंगापुर जानुअघि नेपालले स्वास्थ्य लाभका लागि दिएको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरे। ओलीले आफ्नो […]
देस बिकास र समृद्धिको लागि देसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन जरुरी छ : योगेस भट्टराई
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा नेता योगेश भट्टराईले संसद पुनस्थापना नहुँदासम्म सडक नछाड्ने बताएका छन्। माधव-प्रचण्ड समूहका नेता रहेका नेता भट्टराईले संसद पुर्नस्थापना र बालुवाटारमा आफ्नो पक्षले चुनेको प्रधानमन्त्री नबस्दासम्म सडक नछाड्ने स्पष्ट पारेका हुन। यस्तै, आफ्नो पार्टीले पुस १४ गते काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गर्ने समेत बताएका छन्। ओली सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा लाखौं मानिस सहभागी हुने […]
केपी ओली बयलगाडामै हुनुहुन्छ: प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिए भनेर विश्वास गर्नु गल्ती भएको भन्दै क्षमायाचना गरेका छन् । आज दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले ओलीले कलंकको टिका लगाएको पनि गम्भीर आरोप लगाए […]
कमरेडहरु ! ओलीकाे पतन सुरु भयाे, नेकपा र सूर्यचिन्ह हाम्रै हुन्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशी शक्ति र परिवर्तत नचाहने शक्तिको आडामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने कदम चालेको बताएका छन्। पूर्वराजदूत लक्की शेर्पासहित शेपा समूदाका अभियान्ताहरुसँग आज साँझ भएको अन्तरक्रियाका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम फिर्ता गराउन आन्दोलनमा होमिन आग्रह गरेका छन्। ‘देशलाई समृद्ध बनाउने कोणबाट हेर्दा अहिलेको परिश्थिति अलि […]
वीरगञ्ज । पूर्व सभासद बिचारी यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे रोचक प्रसंग उठाएका छन् । उनले ओली कम्युनिष्ट आन्दोलन विरोधी देखिएको आरोप लगाउँदै ओलीले देश बर्बाद पारेको बताएका छन् । पर्सामा प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलामा उनले ओलीले देश धरापमा परेको समेत बताएका छन् । उनले मदन भण्डारीले भनेको वाक्य सम्झिँदै अहिले त्यो वाक्य चरिथार्थ बएको बताएका छन् […]
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण कुलमान घिसिङ हटेको खुलासा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न नसकिएको पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खुलासा गरेका छन् । ‘नागरिक संवाद’ मा पुनले यस्तो खुलासा गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री रहेका बेला आफूले मन्त्रिपरिषद्मा कुलमानको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर जाँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुरै नसुनेको उनले आरोप लगाएका छन्। […]
देशवासीको नाममा राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन : अब म फर्किने समय आएको महशुस भयो …
काठमाडौँ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताले चाहे शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने जनाउ दिनु भएको छ। फेसबुकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीलाई बक्सेकाे विशेष सन्देश भन्दै भाइरल भइरहेको विज्ञप्तीमा शाहले ‘देशले मागेको सहयोग’ गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई अपिल गर्नु भएको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सबै मित्र, सहयोगी तथा शुभचिन्तकहरुलाई आफ्ना व्यक्तिगत तुष्टी पूर्वाग्रह र अनावश्यक शंका […]
अनुसन्धानको खुलासा : सिन्धु घाटी सभ्यताका मानिस गाईको मासु धेरै खान्थे
चार हजार वर्ष पुरानो सिन्धु घाटी सभ्यताका मानिसको खानपान कस्तो थियो भन्नेबारे एक अध्ययनले खुलासा गरेको छ। अनुसन्धानअनुसार सिन्धु घाटी सभ्यताका मानिसले मासु धेरै मन पराउँथे। गाउँ तथा सरहका खानपान लगभग उस्तै थियो। उनीहरू गाई, भैंसी, बाख्रा र सुँगुरका मासु खान्थे। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता अक्षयेता सूर्यनारायणले आफ्नो अनुसन्धानमा सिन्धु घाटी सभ्यताका मानिसले कस्तो खानपान गरेका […]
केपी समूह चोरहरुको समूह हो, हामी साधु हौं, हामीसँग तुलना हुन सक्दैन : माधव नेपाल
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीनिकटको समूह चोरहरुको समूह भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार बेलुका हिमालय टेलिभिजनमा एक घण्टा लामो अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालले उक्त समूहमा कुनै नैतिकता नभएको बताएका हुन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालले भने, ‘‘माथिदेखि तलसम्म गैरकम्युनिस्ट आचरण पढाइएको छ। त्यो समूह चोरहरुको समूह हो। त्यहाँ […]
नेतृत्व छोड्न तयार छु, तर क्रान्ति छोड्न सकिन्नँ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्ड गणतान्त्रिक प्रणाली र पार्टी एकतालाई संस्थागत बनाउन व्यक्ति र पद ठूलो कुरा नभएको बताए। ‘पदभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्र र पार्टी एकता हो। आवश्यक परे जो कसैले पनि त्याग गर्न […]
‘केपी ओली समस्या हुन्, प्रचण्ड समाधान हुन्’ : दलजीत श्रीपाली
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व खेलकूदमन्त्री दलजीत श्रीपालीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रको समस्याको सूत्रधार भएको बताएका छन्। पार्टीमा उत्पन्न समस्याको जरो केपी ओलीको गलत प्रवृत्ति र शैली भएको उनको तर्क छ। आफूले गरेका गल्ती, कमी कमजोरीलाई अर्कैको टाउकोमा थोपरिदिने, आफू सही छु भनी आत्मरति लिने काम पार्टी र देशको जिम्मेवार […]
प्रचण्डको ‘नयाँ राजनीतिक विश्लेषण’ सार्वजनिक
काठमाडौंं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगत ३ वर्षमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिएका अन्तरवार्ताहरुको संग्रह पुस्तकका रुपमा सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले २०७४ देखि २०७७ सम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्ताहरुको संग्रह “नयाँ राजनीतिक विश्लेषण” पुस्तक शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित अन्तर्वार्ताहरुको संगालो प्रस्तुत […]
समाचार सरकारले असफलता लुकाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो : वैद्य
समाचार कमरेडहरु ! ओलीकाे पतन सुरु भयाे, नेकपा र सूर्यचिन्ह हाम्रै हुन्छ : प्रचण्ड
समाचार लोडसेडिङ अन्त्य कुलमानले होइन, केपी ओलीले गरेका हुन् : पोखरेल
समाचार प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण कुलमान घिसिङ हटेको खुलासा
समाचार केपी ओली विषालु गोमन सर्प रहेछन् : जनार्दन शर्मा
समाचार मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्र गफाडी खोज्नुपर्‍यो भने केपी ओली भेट्दा हुन्छ : नेता नेपाल